Kuda Apple Brazil, HomePod ine skrini uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac | Ndinobva mac
Kuda Apple Brazil, HomePod ine skrini uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Jordi Gimenez | 28/03/2021 11:00 | dzakawanda
Mushure mekusimbisirwa kare pasina chiitiko cheApple mumwedzi uno waKurume Tinotarisana nekutambanudza kwekupedzisira kwemwedzi uno nechido uye zvinoita sekunge tichava nenhau muzvigadzirwa zveApple muna Kubvumbi. Zvine musoro kuti hapana chakasimbiswa uye zvese runyerekupe, kunyangwe chiri chokwadi kuti tinogona kuve nekumwe kushamisika muchimiro chechigadzirwa.
Ipo izvi zvichiitika isu ticha tarisa pane Zvakajeka pavhiki ndiri Kubva kuMac. Saka ngatione dzimwe dzenyaya nezve Apple nyika iyo isu takagovana nemunhu wese pawebhu.
Yekutanga yenhau svondo rino yakaipa zvakakwana kukambani yeCupertino uye iri nezve mhosva yakamisikidzwa muBrazil yekushambadzira kushambadzira. Aya marudzi ematare anowanzo kuve akajairika Mumakambani ese, asi hongu, muApple kukanganisa kwacho kunowanzo kuve kwakakura nekuda kwehukuru hwekambani uye nesimba rehupfumi zvarinazvo.
Apple's HomePods yakagumiswa mazuva mashoma apfuura uye ichi chinhu chinokuvadza vashandisi zvakanyanya. Chero zvazvingaitika nhau kana nyowani runyerekupe nezve inogona kuitika nhau dzePambaPod ine skrini ivo vakasimudza mweya zvakare kune isina kunyanyisa ...
Iyo beta vhezheni inogara ichiwedzera nyowani maficha kune kodhi yako uye yazvino vhezheni yemacOS yakaburitswa inoratidza maviri anofungidzirwa matsva eMac mamodheru ane M1 processor. Kwete kuti inotaura chaizvo kuti iMac mbiri ine processor iyi asi isu taigona kutaura nekuchengeteka kuzere kuti aya ndiwo magumo acho.
Kuti tipedze tinofanirwa kutaura nezveMuranda uye ndeyekuti Chishanu chapfuura mwaka wechipiri wakapera uye neChishanu chino tatopotsa chikamu chitsva. Mupfungwa iyi unofanirwa kudzikama kubvira munguva pfupi tichava nemwaka wechitatu y pamwe zvakatowanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Kuda Apple Brazil, HomePod ine skrini uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac